စွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးသော အစားအသောက်များ - Hello Sayarwon
Kyaw Thura Htun မှ ရေးသားသည်။ 16/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
လူတွေကအများသောအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ကုန်ဆုံးသွားတဲ့စွမ်းအင်ကိုပြန်ဖြည့်ဖို့ကော်ဖီတစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်သကြားလုံးတွေကိုစားကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေကထိရောက်ပေမယ့်အချိန်တိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာစွမ်းအင်ကုန်ခန်းမှာအသေအချာပါဘဲ။ ဒါကိုရှောင်ဖို့အတွက်သင့်အနေနဲ့ပရိုတိန်း၊အမျှင်ဓါတ်နဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသင့်ပါတယ်။ ဒါတွေကသာစွမ်းအင်ကိုကြာကြာထိန်းထားနိုင်မှာပါ။ အောက်မှာပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုစမ်းကြည့်ရအောင်။
ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေကသင့်ရဲ့ကိုယ်အတွက် လောင်စာဆီလို့တင်စားလို့ရပါတယ်။ အစားအစာတိုင်းမှာမတူညီတဲ့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်ဖြူနဲ့အစေ့အဆံအစာအစာတွေဥပမာ – အုတ်ဂျုံမှုန့်နဲ့အစေ့အဆံပေါင်မုန့်တို့ကိုစားခြင်းကသင့်ကိုယ်အတွက်ချက်ချင်းလုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ရစေမှာပါ။
လေ့လာသူတွေက quinoa လို့ခေါ်တဲ့စွမ်းအားမြင့်အစေ့အဆံတစ်မျိုးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ quinoa မှာအမျှင်ဓါတ်အများအပြားပါဝင်တဲ့အပြင်ဗီတာမင်ဘီနဲ့ပရိုတိန်းလေးအမြောက်အမြားလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သူ့ကိုဆန်လိုဘဲလွယ်ကူစွာချက်ပြုတ်နိုင်ပြီးပျားရည်တွေ၊တခြားအဆံတွေ၊ဘယ်ရီသီးတွေနဲ့လည်းရောပြီးအရသာရှိတဲ့မနက်စာရရှိနိုင်ပါတယ်။
အယ်လ်မွန်စေ့တွေကအဆာပြေစားဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတွေပါ။ သူတို့ကသင့်ရဲ့ကိုယ်ကိုစွမ်းအင်ပေးရုံသာမကသူတို့မှာမဂ္ဂနီဆီယမ် နဲ့ဗီတာမင်ဘီလိုမျိုးအာဟာရဓါတ်တွေလည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်က လူကိုယ်ရဲ့ဇီဝကာမဖြစ်စဉ်တွေကိုထိန်းညှိပေးပြီးဗီတာမင်ဘီကတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနဲ့အာရုံမစူးစိုက်နိုင်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တစ်ခါစားရင်၂၈ဂရမ်ဒါမှမဟုတ်၂၃ စေ့စားပေးခြင်းကသင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓါကိုလန်းဆန်းစေဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ကသင်ထောပတ်၊ဆားတွေနဲ့ရောမစားသရွေ့သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ အကြောင်းက ပြောင်းဖူးဆိုတာလည်းအစေ့အဆံတစ်မျိုးပါ။ သူကအမျှင်ဓါတ်ကြွယ်ဝတဲ့အပြင်စားရလည်းလွယ်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်တွေကတခြားမုန့်တွေအာလူးကြော်တွေထက်အဆာပြေစေမှာပါ။ မှတ်သားထားရမှာတစ်ခုကရုပ်ရှင်ရုံမှာရတဲ့ ထောပတ်ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်တွေထက်ကိုအဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်တွေကိုပဲတခြားဟင်းခတ်တွေအဆာပလာတွေနဲ့စားပါ။
လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
သင့်ရဲ့ခန္ဓါကိုယ်ကိုစွမ်းအင်ပြည့်နေစေဖို့က ရေတွေသောက်ရမယ့်အပြင်လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးနဲ့အရွက်တွေစားပြီး ရေဓါတ်ထိန်းထားဖို့လည်းလိုပါတယ်။
သစ်သီးတွေကကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်သာမကဗီတာမင်အေနဲ့ စီကိုပါ ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သင်အချိုစားချင်တဲ့အခါသစ်သီးစားခြင်းကသင့်ကိုကျန်းမာစေပါတယ်။ အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့တစ်နေ့ကိုသစ်သီးဖျော်ရည်နှစ်ခွက်နဲ့တစ်ဝက်သောက်ပေးသင့်တယ်လို့အမေရိကန် သုတေသနတစ်ခုက ဆိုပါတယ်။။ ဒါ့အပြင်သင့်အစားအစာထဲကိုအသီးနဲ့ဟင်းရွက်တွေထည့်စားတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်ပါ။
အာဟာရကျွမ်းကျင်သူတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ပတ်ကိုငါးနဲ့အခွံမာကောင်နှစ်ကြိမ်စားဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ ငါးတွေကချက်ဖို့လွယ်တဲ့အပြင်အရသာရှိပါတယ်။ ပင်လယ်စာတွေကသံဓါတ်ပေါများပါတယ်။ သံဓါတ်တွေကလူကိုယ်အနှ့အောက်ဆီဂျင်တွေသယ်ပို့ရာမှာကူညီပါတယ်။ဥပမာကမာကောင်နဲ့ဂုံးကောင်တစ်ပန်းကန်စားခြင်းကသင့်တစ်နေ့သံဓါတ်လိုအပ်မှုရဲ့၃၀ကနေ၅၀ရာခိုင်နှုန်းကိုရစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆယ်လမွန်ငါးမှာပါတဲ့ပရိုတိန်းနဲ့အိုမီဂါ သရီးဖက်တီးအက်ဆစ် တွေကနှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါတယ်။
သင့်ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကသင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ဦးနှောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့စွမ်းအင်နဲ့စိတ်ခံစားမှုအပေါ်လည်းသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။“တစ်နေ့ပန်းသီးတစ်လုံးစားခြင်းကဆရာဝန်ကိုအဝေးရောက်စေတယ်” ဆိုတဲ့ဆိုရိုးကအလကားပြောထားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။
11 Ways to Boost Your Energy With Food. http://www.health.com/health/gallery/0,,20683067,00.html.
Accessed December 15, 2016.
Mom’s Guide to Family Health: New Year Food and Fitness. http://www.webmd.com/parenting/family-health-12/slideshow-energy- foods.
10 Healthy Foods That Boost Energy. http://www.everydayhealth.com/fitness-pictures/energy- boosting-
Top 10 Healthy Energy-Boosting Foods. http://www.healthline.com/health-slideshow/energy-boosting-foods